Boils at Buttock - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Boils at Buttock
ခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်တာနဲ့ ဒါဟာသွေးစုနာမှန်း တန်းသိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ပြရခက်တဲ့…. တင်ပါးလိုနေရာမှာမှ နီနီရဲရဲအနာဖုကြီးဖြစ်…..ကိုင်ကြည့်ရင် ထိုအဖုနဲ့တစ်ဝိုက်က ပူ…..နာကလည်း နာ…..ထိုင်မရ ထမရနဲ့…..အတော်လေးကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ပြသနာရယ်ပါ။
သွေးစုနာဖြစ်ရခြင်းကတော့ တင်ပါးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အမွှေးအိတ်လေးတွေကို ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးဝင်တာကြောင့်ပါ။တင်ပါးအပါအဝင် အမွှေးအမျှင်ပေါက်တဲ့မည်သည့်နေရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တင်ပါးပေါက်တဲ့အခါ သွေးစုနာ၊ မျက်တောင်မွှေးလေးတွေကြားမှာပေါက်တော့ မျက်စိစွံ၊ ကျောပြင်မှာပေါက်တဲ့အခါ အနာပဆုပ်….စသဖြင့် အနာပေါက်တဲ့နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကွဲပြားတာပေါ့။
သွေးစုနာဟာ နာလည်းနာ….နေရထိုင်ရ သွားရလာရတာလည်း အဆင်မပြေတဲ့ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်….သင့်အနေနဲ့ သွေးစုနာပေါက်လာခဲ့သည်ရှိသော် အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းစေရန်ငှာ အောက်ပါအချက်လေးတွေ လိုက်နာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် :
၁) အနာတစ်ဝိုက်ကို ရေနွေးဝတ်ကပ်ပေးပါ။တစ်ခါကပ်လျှင် ၁၀မိနစ် -၁၅မိနစ်ကြာ ကပ်နိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင် ၃ကြိမ်-၄ကြိမ်ခန့် ကပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက နာကျင်ခြင်း သိသာစွာသက်သာစေပါတယ်။
၂)ပါရာစီတမော (သို့) Ibuptofenကဲ့သို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်န်ုင်ပါတယ်။
၃)အနာနှင့်တစ်ဝိုက်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားပါ။အနာကို ကုတ်ခြင်း၊ပွတ်ခြင်း၊ညှစ်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။
၅)အနာ သူ့အလိုအလျောက်ပေါက်သွားတဲ့အခါ ပိုးသတ်ထားသော ပတ်တီး(သို့)ဂွမ်းဖြင့် အုပ်ကာ စနစ်တကျ သန့်စင်ပါ။ ပြည်များမှတစ်ဆင့် ဘက်တီးရီးများ အခြားနေရာများသို့မပြန့်ပွားစေရန်ဖြစ်သည်။
၆)အထက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်မသက်သာပါက အချိန်မီ ဆေးခန်းပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ဆရာဝန်အနေဖြင့် အနာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်း (သို့) အနာကိုခွဲ၍ ပြည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကုသပါလိမ့်မည်။
ေခါင္းစဥ္ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာေသြးစုနာမွန္း တန္းသိမယ္ထင္ပါတယ္။
ဆရာဝန္ျပရခက္တဲ့…. တင္ပါးလိုေနရာမွာမွ နီနီရဲရဲအနာဖုႀကီးျဖစ္…..ကိုင္ၾကည့္ရင္ ထိုအဖုနဲ႔တစ္ဝိုက္က ပူ…..နာကလည္း နာ…..ထိုင္မရ ထမရနဲ႔…..အေတာ္ေလးကို ဒုကၡေပးတဲ့ ျပသနာရယ္ပါ။
ေသြးစုနာျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ တင္ပါးတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့အေမႊးအိတ္ေလးေတြကို ဘက္တီးရီးယားပိုးတစ္မ်ိဳးဝင္တာေၾကာင့္ပါ။တင္ပါးအပါအဝင္ အေမႊးအမၽွင္ေပါက္တဲ့မည္သည့္ေနရာမဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။တင္ပါးေပါက္တဲ့အခါ ေသြးစုနာ၊ မ်က္ေတာင္ေမႊးေလးေတြၾကားမွာေပါက္ေတာ့ မ်က္စိစြံ၊ ေက်ာျပင္မွာေပါက္တဲ့အခါ အနာပဆုပ္….စသျဖင့္ အနာေပါက္တဲ့ေနရာအေပၚမူတည္ၿပီး အေခၚအေဝၚေလးေတြကြဲျပားတာေပါ့။
ေသြးစုနာဟာ နာလည္းနာ….ေနရထိုင္ရ သြားရလာရတာလည္း အဆင္မေျပတဲ့ ျပသနာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္….သင့္အေနနဲ႔ ေသြးစုနာေပါက္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္ အျမန္ဆံုး သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ငွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးေတြ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္ :
၁) အနာတစ္ဝိုက္ကို ေရေႏြးဝတ္ကပ္ေပးပါ။တစ္ခါကပ္လၽွင္ ၁၀မိနစ္ -၁၅မိနစ္ၾကာ ကပ္ႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႔လၽွင္ ၃ႀကိမ္-၄ႀကိမ္ခန္႔ ကပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီနည္းလမ္းက နာက်င္ျခင္း သိသာစြာသက္သာေစပါတယ္။
၂)ပါရာစီတေမာ (သို႔) Ibuptofenကဲ့သို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ေသာက္ႏ္ုင္ပါတယ္။
၃)အနာႏွင့္တစ္ဝိုက္ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားပါ။အနာကို ကုတ္ျခင္း၊ပြတ္ျခင္း၊ညႇစ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
၅)အနာ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ေပါက္သြားတဲ့အခါ ပိုးသတ္ထားေသာ ပတ္တီး(သို႔)ဂြမ္းျဖင့္ အုပ္ကာ စနစ္တက် သန္႔စင္ပါ။ ျပည္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘက္တီးရီးမ်ား အျခားေနရာမ်ားသို႔မျပန္႔ပြားေစရန္ျဖစ္သည္။
၆)အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္မသက္သာပါက အခ်ိန္မီ ေဆးခန္းျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ဆရာဝန္အေနျဖင့္ အနာအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးေပးျခင္း (သို႔) အနာကိုခြဲ၍ ျပည္ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကုသပါလိမ့္မည္။
Benefits of Yoghurt
How to care ur newborn baby warm & how important it is?
Covid - 19ကူးစက်တတ်သောရောဂါများအထွေထွေရောဂါများ
Covid19 third wave and symptoms
Covid19 တတိယလှိုင်းနဲ့ လက္ခဏာရပ်များ Covid19နဲ့တတိယလှိုင်းအန္တရာယ်ကတော့လက်ရှိမှာတကမ္ဘာလုံးကိုခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေပြီး တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင်တော့ စတုတ္ထလှိုင်းဆီကိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ Covid-19 တတိယလှိုင်းနဲ့အတူ ကိုရိုနာမျိုးကွဲသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုတွေကိုအစဉ်တစိုက်နဲ့အရှိန်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုစားနေချိန်မှာ တတိယလှိုင်းနဲ့အတူ သဘာဝတိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ မျိုးကွဲသစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် တတိယလှိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ မတူညီတဲ့အခြေအနေတွေရှိလို့နေပါတယ် လူတွေရဲ့နေထိုင်သွားလာမှုပေါ့ဆတာတွေ သတိလက်လွတ်ဖြစ်တာတွေက ဒီပိုးကိုထပ်မံအနိုင်ရစေဖို့ရာအခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်လို့နေပါတယ် အခုလိုမျိုးရိုးဗီဇကွဲအသစ်ကပိုမိုကူးစက်မြန်တာကြောင့်…
Covid19 and home care
Covid19နှင့် အိမ်တွင်းစောင့်ရှောက်မှုများ COVID-19 ရှိသူနှင့်ထိတွေ့မိပြီး မိမိကိုယ်ကိုသံသယရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ် ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရာနေရာများ (သို့မဟုတ)် COVID-19 hotline သို့ခေါ်ဆိုပေးပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်ဖို့ရာအတွက်အဆက်အသွယ်ရှာဖွေတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ Covid19 Test စစ်ဆေးလို့မရသေးပါက …
Blood clotting problems with Covid19
Covid19နှင့်သွေးခဲခြင်းပြသနာ Covid 19ရောဂါကိုယ်တိုင်သည် သွေးခဲခြင်းကို ၈ဆမှ ၁ဝဆထိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ သွေးခဲခြင်းအန္တရာယ်နှင့် ချင့်ချိန်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးမထိုးကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ရာ လိုအပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနှုန်းမြင့်တာမို့ အထူးသတိပြုကြဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ယခုcovidကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားတချို့မှာတော့ သွေးခဲခြင်း…